Tag: Fitsidihana | Martech Zone
Na ireo orinasa lehibe indrindra aza dia miady amin'ny metatra fanarahana. Nandritra ny folo taona mahery dia nilaza aho fa matetika ny famakafakana dia mamokatra fanontaniana betsaka kokoa noho ny valiny satria ny mpampiasa dia mizara, manivana ary manadihady ny fifamoivoizana. Atambaro izany miaraka amin'ny zava-misy fa mihoatra ny antsasaky ny fivezivezenao ny analytics dia mety hateraky ny bot, ary tena ilaozanao mihorakoraka ny lohanao matetika. Mojo Media Labs dia namokatra an'ity infographic ity, The Inbound Marketer's Guide to Data
KISSmetrics dia namoaka fampiharana iPhone FREE vaovao antsoina hoe My Analytics. Io no fomba haingana indrindra hahitanao ny fahombiazan'ny metatra Google Analytics rehefa lavitra ny latabatrao ianao. Tany am-piandohan'ity taona ity, ireo olona ao amin'ny KISSmetrics dia nitady fampiharana Google Analytics mendrika hanampiana azy ireo hitazona tab eo amin'ny angon-drakitra manokana. Ary tsy nahita izy ireo. Na ny fampiharana finday dia WAY fototra loatra ary tsy hamela anao hanao fampitahana, na
Sabotsy, Desambra 26, 2009 Sabotsy, Janoary 8, 2011 Bill Dawson
Mandany ny ankabeazan'ny andro fialantsasatra ireo mpivarotra ary voampanga ho nanao varotra vanim-potoana io. Taorian'ny nijereko ireo zanak'anabaviko nanara-maso an'i NORAD momba ny fivoaran'i Santa manerana an'izao tontolo izao, dia nieritreritra aho fa mety mendrika ny hisaintsaina ny anjara birikin'ny marketing tamin'ny vanim-potoana Holiday. Na dia efa mahazatra nandritra ny taona vitsivitsy aza ny akanjo mena sy fotsy nataon'i Santa Claus, dia nanamafy an'ity kinova ity i Haddon Sundblom tamin'ny famoronana andian-tsary ho an'i Coca-Cola tamin'ny taona 1930. Natao hanampy voalohany